Dejero မှ LIVE + NewsBook ဆော့ဖ်ဝဲနောက်ဆုံးထုတ်ထုတ်လွှင့်မှုသည် Live Video Streaming အတွက် BGAN-HDR နှင့် Bonding ကိုခွင့်ပြုသည်။ NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » Dejero မှစ. တိုက်ရိုက် + NewsBook Software ၏နောက်ဆုံးပေါ်ဖြန့်ချိတိုက်ရိုက်ဗီဒီယိုလွှများအတွက် BGAN-HDR နှင့် Bond ဖွင့်မည်
Dejero မှစ. တိုက်ရိုက် + NewsBook Software ၏နောက်ဆုံးပေါ်ဖြန့်ချိတိုက်ရိုက်ဗီဒီယိုလွှများအတွက် BGAN-HDR နှင့် Bond ဖွင့်မည်
Waterloo, အွန် - နိုဝင်ဘာ 24, 2015 - Dejero ယနေ့ဗီဒီယို 1 Mbps ထိထက် သာ. ကြီးမြတ်တိုက်ရိုက်စီးထုတ်လုပ်ရန်ခရီးဆောင် Broadband ဂလိုဘယ်ဧရိယာကွန်ယက် (BGAN) ဆိပ်ကမ်းဘွန်းမှအသုံးပြုသူများကိုဖွင့်, Mac အတွက်မှတ်စုစာအုပ်၎င်း၏တိုက်ရိုက် + NewsBook ဆော့ဖ်ဝဲတစ်ခု update ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ဒါကနောက်ဆုံးပေါ် Inmarsat L-တီးဝိုင်းဝန်ဆောင်မှုအပိုဆောင်းကအင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုများကိုဘယ်နေရာမှာမဆို BGAN ရဲ့ဖြင့်ဖုံးလွှမ်းကမ္ဘာပေါ်မှာထံမှတိုက်ရိုက်ဗွီဒီယိုကိုထုတ်လွှင့်ဖွ ဂြိုဟ်တု အဘယ်သူမျှမကအခြားကွန်ယက်ကိုဆက်သွယ်မှုများကိုရရှိနိုင်ပါရှိရာအလွန်ဝေးလံသောနေရာများအပါအဝင်ကွန်ယက်။
Dejero'' s ကိုတိုက်ရိုက် + NewsBook အလွန်စွယ်စုံ "go-ဘယ်နေရာမှာမဆို" ဗွီဒီယိုကို uplink ဖြေရှင်းချက်သို့ Mac အတွက်မှတ်စုစာအုပ်ပြောင်းလဲ။ အဆိုပါ BGAN-HDR ကို Bond အင်္ဂါရပ်နှင့်အတူအသုံးပြုသူများယခုတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှဗီဒီယိုကိုပြန် Ethernet မှတဆင့်မှတ်စုစာအုပ်မှမျိုးစုံ Explorer ကို-710 ဆိပ်ကမ်းကိုဆက်သွယ်နေဖြင့်ထုတ်လွှင့်စက်ရုံရန်, မှတျတမျးတငျထားနှင့်တည်းဖြတ်ဖိုင်များအဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်, feeds ပေးပို့နိုင်ပါတယ်။ တစ်ဦးအမြင့်-Data ကို-နှုန်း (HDR) streaming များဆက်သွယ်မှုကိုရွေးချယ်သောအခါအဆိုပါတိုက်ရိုက် + NewsBook software ကိုအလိုအလျှောက်ထုတ်လွှင့် settings ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေ။ BGAN အပြင်, ဆယ်လူလာမျိုးစုံတိုက်ရိုက် + NewsBook software ကိုခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်, Wi-Fi နှင့် Ethernet ဟာဆက်သွယ်မှုယုံကြည်စိတ်ချရသောအရည်အသွေးမြင့်, အနိမ့်-အောင်းနေချိန်တွင်ဗီဒီယို၏ဂီယာတစ်ခုစုပေါင်းဒေတာလမ်းကြောင်းဖန်တီးရန်။
Network ကိုတီထွင်, ဘက်ပေါင်းစုံတစ်ဦးဦးဆောင်ပေးသူ ဂြိုဟ်တု ဆက်သွယ်ရေးဖြေရှင်းနည်းများနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ခဲ့ထားပါတယ် Dejero Explorer ကို-710 BGAN HDR ကိုဆိပ်ကမ်းများမှတဆင့်ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်သစ်ကိုကပ်လျက်တည်ရှိ HDR ဝန်ဆောင်မှုများအတွက်တိုက်ရိုက် + NewsBook software ကိုပူဇော်ရန်။ စဉ်တွင် Dejero မြင့်မားအရည်အသွေးရုပ်ပုံပေးဖို့ကပ်လျက်တည်ရှိ HDR ဝန်ဆောင်မှု leverages, ထုတ်လွှင့်မှုကိုလျှော့ချနိုင်ကြသည် ဂြိုဟ်တု ပိုတတ်နိုင်အချိုးမညီ HDR streaming ဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ကုန်ကျစရိတ်။
"Dejero ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးထုတ်လွှင့်အချို့အပါအဝင် - - အသုံးပြုမှုကပ်လျက်တည်ရှိဆယ်လူလာ encoding ကနည်းပညာ၏ဦးဆောင်ပံ့ပိုးပေးများထဲမှ, ငါတို့မီဒီယာဖောက်သည်အများအပြားဖြစ်ပါသည် Dejero မိုဘိုင်းအိုင်ပီကိုဗီဒီယိုသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဖြေရှင်းနည်းများ ဂြိုဟ်တု newsgathering ။ သူတို့ရဲ့တည်ဆဲနှင့်အတူအလုပ်လုပ်အများအပြားမေတ္တာရပ်ခံတစ်ကပ်လျက်တည်ရှိ HDR ကိုဖြေရှင်းချက် Dejero တိုက်ရိုက် + NewsBook အပါအဝင်စနစ်များ, "ယောဟနျ Stoltz, ကွန်ယက်တီထွင်များအတွက်မီဒီယာကဏ္ဍ၏ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌကပြောကြားခဲ့သည်။ "ဒီရလဒ်ကုန်ကျ-ထိရောက်စွာမှတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှကဗီဒီယို streaming စဉ်တိုးတက်လာသောရုပ်ပုံအရည်အသွေးအများအတွက် Bandwidth ကိုနှစ်ဆဖောက်သည်ဖွထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကပ်လျက်တည်ရှိ HDR ဝန်ဆောင်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ဤရွေ့ကား Inmarsat စွမ်းရည်အနည်းငယ်သာသို့မဟုတ်လုံးဝမ network ကိုအရင်းအမြစ်များကိုနှင့်အတူဝေးလံခေါင်ဖျားဒေသများရှိပေမယ့်လည်းဆယ်လူလာကွန်ရက်ပိနေကြရသောသိပ်သည်းတိုက်ရိုက်သတင်းအခြေအနေများတွင်သာစံပြပါ။ "
"ကျနော်တို့လယ်ကိုသတင်းထောက်တွေကို, နိုင်ငံခြားသတင်းထောက်များနှင့်တတ်နိုင်သမျှနည်းနည်းဂီယာနှင့်အတူခရီးသွားနေစဉ်အဝေးမှတိုက်ရိုက်သို့မဟုတ်မှတ်တမ်းတင်ထားသောဗီဒီယိုအားအကြောင်းအရာပေးပို့ဖို့လိုအပျသူကတခြားထုတ်လုပ်မှုကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များဘို့ငါတို့တိုက်ရိုက် + NewsBook ဆော့ဖ်ဝဲကိုဒီဇိုင်းထုတ်," ဘရိုင်ယန် CRAM, CEO ဖြစ်သူကလည်း, Dejero။ "ဒီ update ကိုအခြား network အရင်းအမြစ်များပြတ်လပ်ဒေသများရှိဗွီဒီယိုအရည်အသွေးတိုးတက်စေရန်မျိုးစုံ BGAN ဆက်သွယ်မှုသုံးစွဲဖို့စွမ်းရည်နှင့်အတူအစဉ်ထက်ဆော့ဖ်ဝဲကိုပိုမိုစွယ်စုံစေသည်။ အခုတော့ဝေးလံသောနေရာများကနေထုတ်လွှင့်အရည်အသွေးအကြောင်းအရာနှင့်အတူခြိုးဖောကျသတင်းနှင့်တိုက်ရိုက်ဖြစ်ရပ်များကိုဖုံးလွှမ်းရန်အစဉ်အဆက်ထက် ပို. လွယ်ကူသည်။ "
အဆိုပါတိုက်ရိုက် + NewsBook software နှင့်ထံမှပြည့်စုံတိုက်ရိုက် + ပလက်ဖောင်းအကြောင်းကိုပိုမိုသိရှိလိုပါက Dejero www မှာရရှိနိုင်ပါပြီ။dejero.com ။
Network ကိုတီထွင် (ni) တစ်ဦးဦးဆောင်ဖြစ်ပါသည် ဂြိုဟ်တု VSAT ကွန်ရက်များအဘို့စနစ်များ & ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာန်ဆောင်မှုများ, မိုဘိုင်းဘရော့ဒ်ဘန်း, ကမ္ဘာဂြိုဟ်ပေါ်မှာဘယ်နေရာမှာမဆိုဆက်သွယ်ပြောဆိုနိုင်ရန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်ကို enable ပြုလုပ်ထားသည့်ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်ထောက်ခံမှုအတွက်အာရုံစူးစိုက် Push-to-Talk နဲ့ Satphone ဖြေရှင်းချက်၏ပံ့ပိုးပေး။ 1988 အတွက်ထည့်သွင်း, ni ဖြင့်ကမ္ဘာအဝှမ်းရုံးခွဲများမှာတည်ရှိပါတယ်ပညာရှင်များအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကတဆင့်တသမတ်တည်းနဲ့အကျိုးအမြတ်စိုက်ပျိုးခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အောင်မြင်မှုမီဒီယာ, စွမ်းအင်, ရေကြောင်း, စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့်အစိုးရကဏ္ဍများအဘို့အလှည့်-key ကိုဆက်သွယ်ရေးဖြေရှင်းချက်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ပို့ဆောင်မှုမှတဆင့်ရောက်လေပြီ။ ထုံးစံဒီဇိုင်းကိုဖြေရှင်းချက်ပေးဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြင်းနှင့်အမျိုးမျိုးသောပေါင်းစပ် ဂြိုဟ်တု ဖောက်သည်များနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းတိကျတဲ့လိုအပ်ချက်များအတွက်ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာများ, ဆိတ်ကွယ်ရာယှဉ်ပြိုင်ခြင်းမှကျွန်တော်တို့ကိုသတ်မှတ်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက, ခရီးစဉ် www.networkinv.com.
Dejero ဝေးလံခေါင်ဖျားဝယ်ယူ, မိုဃ်းတိမ်ကိုစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် IP ကိုကျော်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်တိုက်ရိုက်ဗီဒီယို multiscreen ဖြန့်ဖြူးရိုးရှင်းစွာ။ ၎င်း၏တိုက်ရိုက် + ပလက်ဖောင်းထုတ်လွှင့်မီဒီယာအဖွဲ့အစည်းများ, နှင့်မိုဘိုင်းထုတ်လုပ်မှုကုမ္ပဏီများသည်ယုံကြည်စိတ်ချရသောချက်ချင်းများနှင့်ကုန်ကျစရိတ်-ထိရောက်စွာသူတို့ရဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာတီဗီ, Web သည်နှင့်မိုဘိုင်းပရိသတ်တွေရောက်ရှိဖို့နိုင်ပါတယ်။ Dejero'' s ကိုစီးပွားဖြစ် cloud-based ပလက်ဖောင်းအသိဥာဏ်နီးပါးဘယ်နေရာကနေမဆိုထုတ်လွှင့်အရည်အသွေးတိုက်ရိုက်ဗွီဒီယိုကိုကယ်လွှတ်ခြင်းငှါကြိုးများနှင့်ကြိုးမဲ့ကွန်ယက်ကိုဆက်သွယ်မှုများကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်ချည်နှောင်ခြင်းကို။ Waterloo, အွန်, ကနေဒါ, ရုံးချုပ် Dejero ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးရှိမိုဘိုင်းဗီဒီယိုထည့်ဝင်မှုအတွက်ယုံကြည်ထားသည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက, www www ။dejero.com ။
ဓာတ်ပုံ Link ကို: www.wallstcom.com/Dejero/Dejero-LIVEplusNewsBookandBGAN.jpg
ဓာတ်ပုံစာတန်းထိုး: အဆိုပါတိုက်ရိုက် + NewsBook Software က၏နောက်ဆုံးရေးသားချိန်ဗားရှင်း Dejero BGAN ပံ့ပိုးမှုနှင့်အတူ
ဓာတ်ပုံ Link ကို: www.wallstcom.com/Dejero/Dejero-NetworkInnovations-LIVEPlusNewsBook.jpeg
ဓာတ်ပုံစာတန်းထိုး: Network ကိုတီထွင်ခြင်းအားဖြင့်နောက်ဆုံးရေးသားချိန်တိုက်ရိုက် + NewsBook Software များနှင့်အတူတစ်လိုင်းပေး Dejero
BGAN-HDR ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ Dejero isovideo, viarte, HDR, ဆူညံသံလျှော့ချရေး, HDR / WCG, HEVC / AVC, HEVC, JCT-VC ကို, 2015, ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး, စွဲငြိဖွယ်ရာ, UHD / 4K / HD ကို H264 / H265, ဝါဆော + NewsBook LIVE Network မှတီထွင် ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် 2015-11-24
ယခင်: Presteigne TFI သောကြာနေ့များအတွက်စတူဒီယိုနှင့်ထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံများကိုထောက်ပံ့ပေး
နောက်တစ်ခု: အသံဖုန်းများအတွက်, LLC သိုလှောင်ဆင်-တောင်ပေါ်ကမှတ်တမ်းများက၎င်း၏အပြည့်အဝလိုင်းများအတွက်ဘက်စုံ Firmware Update ကိုကြေညာ